Rural Tourism muGalicia: kubva Mariña Lucense kuenda kuValdeorras | Kufamba Nhau
Kuita kushanya kwekumaruwa kuGalicia ndiyo imwe nzira yekuziva iyi nharaunda yakanaka yekuchamhembe kweSpain kunze kwekushanyira maguta ayo makuru. Nekuti, kana izvi zvakanaka uye zvakakurisa, iyo Kumaruwa Galicia Iyo inopa inoshamisa nharaunda uye kusiyanisa pakati pemakomo negungwa izvo zvisingakusiye iwe usina hanya.
Misha iri panzvimbo dzakakwirira, misha yakanaka yekuredza uye nzvimbo dzine yavo idiosyncrasies zvinoumba zvese zvaunogona kuwana uchiita zvekushanya kwekumaruwa kuGalicia. Kana iwe uchifarira mazano edu, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Nzvimbo dzakanaka dzekushanya kwekumaruwa kuGalicia
1.1 IRIiraira Sacra
1.3 El Ribeiro, kumwe kushanya kwakakosha kana iwe uchiita zvekushanya kwekumaruwa kuGalicia
1.4 Iyo Mariña Lucense
1.5 Mhenderekedzo yeRufu kana da Morte
1.6 Nharaunda yeValdeorras
Nzvimbo dzakanaka dzekushanya kwekumaruwa kuGalicia
Tichatanga nzira yedu kuburikidza nekumaruwa Galicia tichishanyira nzvimbo dzinonakidza dze Ribeira Sacra uyezve shandura dunhu nenzvimbo. Ngatitangei rwendo rwedu.
Sezvatakakuudza, nzvimbo ino, iri pakati pekuchamhembe kwedunhu reOrense nekumaodzanyemba kweiyo yeLugo, inoratidzirwa nenzvimbo dzayo dzinoyevedza. Pakati peizvi Sil canyons, iyo inoronga nzira yerwizi urwu uye zvakare iyo meander weA Cubela.
Rwizi rwizi runomhanya pakati pemakomo makuru emadziro uye iwe unogona kufamba naro nekatamaran. Asi zvakare fungisisa inonakidza nzvimbo kubva kune anotaridzirwa akagadzirirwa izvi chinangwa.
Uye zvakare, munzvimbo iyi, iyo inozivikanwawo neayo waini, unogona kuwana mataundi enhoroondo senge Monforte de Lemos, neguta rayo rinoshamisa revaJudha uye guta reMiddle Ages. Asi zvakare nezvivakwa zvechitendero senge wemamongi weSan Vicente del Pino uye vanhuwo zvavo sevanodakadza chikoro cheMukadzi wedu weAntigua, akabhabhatidzwa se "Galician Escorial" zvese zvechimiro chayo cheHerria uye nematanho ayo anoshamisa.
Koreji yeMukadzi wedu weAntigua muMonforte de Lemos
Iyi nzvimbo inowanikwa pakati peNavia riverbeds, mu Asturias, uye Sil, mukati Galicia. Iyo ine yakawedzera kuwedzerwa nekuti, pamusoro pezvo, inoenda kubva kuchikamu chekumabvazuva che Lugo kusvikira Leonese Bierzo. Zviri nezve nzvimbo ine makomo iyo yakwanisa kuchengetedza tsika dzayo.
Hunhu hwakanyanya hwadzo ndizvo zvinonzi pallozas. Uyu mubvunzo wezvivakwa zve oval kana denderedzwa chirimwa chine madziro akaderera uye chakafukidzwa nedenga remhando yakafanana yakaita nemashanga e rye. Kwayakatangira pre-Roma, kunyanya Celtic, uye ivo vaishandiswa sedzimba kusvika muzana ramakore rechiXNUMX.
Kana iwe uchida kunakidzwa nezvivakwa zvinoda kuziva, unogona kufamba semuenzaniso kuenda Iyo Cebrero, musha weLugo uyo unopfuura mita XNUMX kukwirira. Iri ndiro guta rekutanga re Mugwagwa waSantiago muGalicia uye kereke yaro isati yatanga-yeRoma yeSanta María zvakare inomira.
El Ribeiro, kumwe kushanya kwakakosha kana iwe uchiita zvekushanya kwekumaruwa kuGalicia
Iyi nharaunda iri mudunhu re Namata uye ine capital yayo mu Ribadavia. Inoshambidzwa nenzizi dzinoverengeka dzakadai seMiño kana Arnoia uye inozivikanwawo nezvayo waini. Muchokwadi, iwe unogona kushanyira imwe yemazhinji ayo wineries.
Ipfungwa zvakare yakanaka kugara mune imwe yayo akawanda spas. Asi zvakare inzvimbo izere nematombo. Pakati pavo zvinoshamisa Trappist wemamongi weSanta María la Real de Oseira, ane mavambo anotangira muzana ramakore rechiXNUMX uye ane chechi ine hunhu hweogival Romanesque maitiro.
Kune chikamu chayo, muRibadavia unogona kuona iyo nhare yeSarmiento; iro guta rekare rine zvisaririra zvechiJudha kota; iyo pre-Romanesque chapel ye Mutsvene Xes de Francelos uye chivakwa chikuru chinoumba Sanctuary yeMukadzi wedu wePortal and the Chechi yeSanto Domingo. Chekupedzisira, muSierra del Suido unogona kuona zvimwe zvivakwa zvakasarudzika: matumba acho. Iwo matombo madiki uye mashanga ehuswa ayo vafudzi vaishandisa kuzvidzivirira kubva kuchando.
Iyo Mariña Lucense
Seizvo zita rayo rinoratidzira, inovhara tambo yemhenderekedzo yedunhu re Lugo izvo zvinobva Ribadeo vakakwira Vicedo,. Nyeredzi hombe yenzvimbo ino ndiyo Makedhedhi mahombekombe, chimwe chezvinhu zvinokwezva zvekushanya kwekumaruwa kuGalicia.
Ichi chivakwa chechisikigo chinowanikwa muparishi yeDevesa, yekanzuru yeRibadeo. Uye iyo inoumbwa nenhevedzano yematombo mahombe ane arched maumbirwo anoita senge kubhururuka mabhureki iripo mumatemberi makuru eGothic. Uye zvakare kuburikidza nemapako uye jecha mukoridho pakati peakakura mabwe matombo. Kana iwe uchikushanyira, unofanirwa kuenda kana paine mvura shoma, nekuti ndiyo nguva yakanakisa yekucherechedza ukuru hwayo.
Asi iyo Catedrales gungwa handiyo chete inokwezva muMariña Lucense. MuRibadeo une dzimba dzakanaka dzeIndia sedzakaita Moreno shongwe and the estuary yeEo estuary. Kune iro chikamu, muCervo unogona kushanyira iyo museum yakatsaurirwa kune nhoroondo Sargadelos ceramics; mu Nursery ndiyo Carlos V gedhi uye muXove maCelt akawanda mafoji akadai seaya Illade y Coto de Velas.
Mhenderekedzo yeRufu kana da Morte
Nechekare mudunhu re La Coruña une imwe yenzvimbo dzinonakidza kwazvo mumaruwa eGalicia. Iyo Costa da Morte iyo inosanganisira iyo yekumadokero nzvimbo yenyika muEurope. Iri mu Cape Fisterra, inoyevedza nzvimbo inopa inoshamisa maonero egungwa pacharo nemahombekombe aro akaomarara uye rakasarudzika kunyura kwezuva.
Asi zvakare inzvimbo yakapfuma mune megalithic yakasara senge iyo madhorobha eDombate and the castro de Borneiro. Zvese izvi pasina kukanganwa misha yakanaka yekuredza inogadzira. Semuyenzaniso, Camariñas, Camelle, Muxia kana Muxía y Bridging. Muchidimbu, ndima izere nengano uye nenyaya dzinozivikanwa dzatinokukurudzira kuti ushanyire.
Isu tinopedzisa rwendo rwedu rwekushanya kumaruwa kuGalicia mudunhu reValdeorras, iri munzvimbo yekumabvazuva kwedunhu re Namata. Ichowo ivhu rakaorera mu waini, asi zvakare ine zvishamiso senge Natural Park yeSierra de la Enciña de Lastra, uko iwe uchaonawo prehistoric zvisaririra.
Nzvimbo yaro inonyanya kukosha ndeye Chikepe cheValdeorras, iri munzvimbo yakadzika yemupata weSil. Iyi villa ine akawanda dzimba dzakanaka, chimwe chivakwa chemazuva ano chakadai seCasino uye akati wandei mabhiriji echiroma souya anoyambuka rwizi Galir. Nezve zvivakwa zvechitendero, inosimbisa iyo chechi yesan mauro, mutariri wedhorobha. Mune izvi, chifananidzo chehuni cheSanto Cristo Nazareno chinonamatwa, icho, sekureva kwenyaya, chakawanikwa murwizi uye chaisakwanisa kutemwa.
Mukupedzisa, takurudzira nhanhatu nzvimbo dzakanaka dzekuita kushanya kwekumaruwa kuGalicia. Hapana chimwe chazvo chingakuodza moyo sezvo ese aine akasiyana uye asingakanganwike zvinokwezva. Shingairira kuziva idzi nzvimbo dzemashiripiti Galicia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways » Rural Tourism kuGalicia